ओशो तपोवनमा ‘यौन’ फ्रि हो ? यसो भन्छन्- अभिनेत्री नम्रता र सोभिता (भिडियो) – Annapurna Post News
एक अन्तर्वार्तामा अभिनेत्री नम्रता सापकोटा र सोभिता सिंखडा खुबै खुलेर कुरा गरेका छन् ।उनीहरुले ओशो तपोवनमा के–के हुन्छ भन्ने खुलाएका छन् । उनीहरु दुबै ओशो सन्यासी हुन् । तपोवनमा गएर ध्यानमा बस्छन् । सोभिता त पूर्ण रुपमा त्यही नै बस्छिन् ।
लग्जरी तरिकाले बस्न चाहानेहरुलाई स्टार होटलभन्दापनि राम्रो व्यवस्थापनि छ । त्यसपछि प्रस्तोताले ओशो तपोवनमा यौन फ्रि छ भनिन्छ, अनेकौँ विवादहरु ल्याइएको छ वास्तविकता के हो ?
ओशो गुरुले यौ नका बारमा खुलेर बोल्नुभएको छ । गास, बास, कपास जस्तै जरुरी छ यो विषयमा किन कुरा गरिन्न भनेर कुरा
यदि ओशो आश्रममा फ्रि थियो भने मानिसजति जो कोहीपनि पुग्थे हो । तर ओशो गुरुले यौ नका बारमा खुलेर बोल्नुभएको छ । गास, बास, कपास जस्तै जरुरी छ यो विषयमा किन कुरा गरिन्न भनेर कुरा गर्नुभएको छ ।
उहाँले यौ नका बारेमा खुलेर बोलेका कारण मात्र त्यस्तो सोचिएको हो । त्यहाँ त्यस्तो हुन्न । त्यहाँ एउटा ठूलो समुदाय छ । आफ्ना घरका सदस्यसहित मानिसहरु पुग्छन् । म आफै मेरो वुवा आमासँग बसेकी छु । नम्रता आफ्ना फूपु फूपाजुहरुसँग बसेकिछन् ।
यहाँको बारेमा बोलेका मेरा कति शब्द भाइरल भएका छन् । मैले यौ न शब्द उच्चारण गरेको मात्र सुनेर भाइरल गराइन्छ
सोभितले यति भनेपछि नम्रता त्यही विषयमा थप्छिन् । यौ न फ्रि भन्नाले त्यो सोचाई मात्र हो । जहाँसम्म लाग्छ । त्यहाँ बसेर निस्किनुभएको व्यक्तिले त्यसो भन्नु हुन्न । ।
बाहिर बसेर अनेकौँ आँकलन गर्नेहरुको कुरा हो । यौ न भनेको यति बलियो छ की मान्छेको दिमागमा त्यही नै बसिरहेको हुन्छ । नेपालमा यस्तो ठाउँ हो की यहाँको बारेमा बोलेका मेरा कति शब्द भाइरल भएका छन् । मैले यौ न शब्द उच्चारण गरेको मात्र सुनेर भाइरल गराइन्छ ।
तर मैले के भनिरहेको छु भनेर कोही त्यसमा ध्यान दिन्न । मानव जीवनमा ७ वटा चक्र छन् । यौ न त एउटा चक्र मात्र हो । अब अरु कति कुरा छन् । मानिसहरु किन यति धेरै सोच्छ ।
गठबन्धनका कार्यकर्ताले गरे एमाले कार्यकर्तामाथि खुकुरी प्रहार, चार जनाको उपचार हुँदै